अड्कियो सदाचार नीति- समाचार - कान्तिपुर समाचार
असार २४, २०७५ चन्द्रशेखर अधिकारी
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको राष्ट्रिय सदाचार नीतिको मस्यौदालाई चर्को कूटनीतिक आलोचना र सरोकारवालाको सुझावपछि अन्तरमन्त्रालय छलफलमा लगिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सदाचार नीति पारित गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय (आईएनजीओ) हरूको सहयोगलाई मात्र नभएर आन्तरिक स्रोत परिचालन, राजनीतिक दल, विधायक, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक क्षेत्रका अधिकारीलाई आचरण पालनामा निर्देशित गर्न लागेको थियो । गैरसरकारी संस्था, प्राध्यापक, शिक्षक, सामाजिक तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिलाई पनि सदाचार नीतिले समेट्ने दाबी सरकारले गरे पनि सरकारले छिमेकीको निर्देशनमा यस्तो गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले सदाचार नीति अन्तिम छलफलमा रहेकाले कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘भद्रगोल अवस्थामा रहेका विभिन्न क्षेत्रलाई अनुशासनमा ल्याउन लागिएको हो, यसबीचमा आएका सुझावलाई मनन गर्दै सुधारेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले भने, ‘सबै सरोकारवालाको धारणा पनि सुनेका छौं । कतिपय जायज चासो सम्बोधन गर्न छलफल भइरहेको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको संगठन (एआईएन) का अध्यक्ष शिवेशचन्द्र रेग्मीले सरकारले नियमन गर्नु र एउटा फ्रेमवर्कभित्र राखेर काम गर्न दिनु राम्रो भएको बताए । ‘त्यसको नाममा झन्झट थप्ने र विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने बनाउनु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संगठनलाई निरुत्साहित गर्नु नै हो,’ उनले भने । सरकारले ल्याउन लागेको सदाचार नीतिबारे जानकारी पाएपछि त्यस्तो मस्यौदा अध्ययन गरेर संयुक्त सुझाव दिइएको उनले बताए ।
कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गलत काम गर्‍यो भन्दैमा सबैलाई त्यही छाताभित्र राखेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । त्यस्तालाई कारबाही गरेर सुधार गर्न सरकारलाई सुझाइएको उनले बताए । सरकार र जनता राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय (एनजीओ), अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी निकाय (आईएनजीओ) र दातृ निकायलाई एकै स्थानमा राखेर हेर्न नहुने तर्क गरे । ‘राष्ट्रसंघीय निकायलाई समेत आईएनजीओ भनियो । त्यस्ता निकायबाट हुने गल्तीमा समेत आईएनजीओको नाम मुछिएको छ ।’
बाह्य सहयोग लिएमा एक साताभित्र अर्थ मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनमा विवरणसहित सूचना दिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था रहेकाले पनि दातृ निकाय र गैरसरकारी संस्था अल्मलिएका थिए । प्रतिवेदन प्रकाशित नै हुने हुनाले त्यसलाई अध्ययन गरेर कारबाही गर्न सकिने अवस्था छ । ‘तर सरकारसँग स्वीकृति लिएर प्रतिवेदन निकाल्ने भन्ने विषय प्रतिवेदन नै ननिकाल भनिएको जस्तो हो, सरकारको संयन्त्र चुस्त छैन कर्मचारीतन्त्र हरेक तहमा बार्गेन गर्ने गर्छन भन्दै कूटनीतिक निकायले गुनासो गरेका छन्, ‘विदेश भ्रमणदेखि उपहार (फोन, ल्यापटप) को लागि चाह राख्ने गर्छन् ।’
गैरसरकारी संस्थाका अध्यक्ष गोपाल लम्सालले पनि सरकारलाई सुझाव दिइसकेको बताउँदै भने, ‘सरकारले अहिले नै त्यो नीति परित गर्दैन होला । किनकि त्यहाँ कतिपय विषय निकै झन्झटिलो रहेको थियो । यही रूपमा आउने अवस्थामा छैन ।’ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्राप्त मस्यौदामा गैरसरकारी संस्था तीन महिनाभित्र नवीकरण नभए स्वत: खारेज हुने र प्रशासन खर्च न्यून हुनुपर्नेजस्ता व्यवस्था यसमा छ ।
कर्मचारी सेवा निवृत्त भएपछि संस्थामा जान नपाउने र निजामती कर्मचारी एवं संस्थान तथा सुरक्षा निकायका काम गरेकालाई एउटै नीतिअन्तर्गत राख्न सदाचार नीतिमा छ । हुनत सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि यस्ता नीतिहरू बनाउने र पछि छलफलमा लगेर थन्क्याउने गरेको छ । अहिले पनि यो नीति यही तहमा पुग्न लागेको हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताए ।
प्रकाशित : असार २४, २०७५ ०७:१७
मुस्ताङ दुर्घटनाका घाइते भन्छन्– ‘ढालाले ढ्याम–ढ्याम च्याप्यो’
काठमाडौँ — हामी काम गर्ने ठाउँमा जहिल्यै टिपर चढेर ओहोरदोहोर गथ्र्यौं । शुक्रबार पनि खाना खाएर काममा जाँदै थियौं । हिँडेर जाँदा ४५ मिनेट लाग्छ । शुक्रबार टिपरमा बालुवा भरी थियो । हामी ३०–३२ जना कामदार थियौं । म दाङको सुरवीर चौधरीको काखमा बसेको थिएँ ।
रोल्पा लिवाङको अर्जुन घर्ती र प्रसाद पुनलाई अंगालो हालेर जिस्किँदै थिएँ । हामी त्यसरी नै कहिले ढुंगा, कहिले बालुवामाथि बसेर जान्थ्यौं । कोरला जाने पुरानो बाटोबाट टिपर गुडेको थियो । टिपर न्युट्रलमा थियो जस्तो लाग्छ । एकछिनमा झ्याक–झ्याक गर्दै ओरालोतिर गयो ।
ब्रेक नलागेपछि गुल्टियो । पछाडिको ढालामा लक लागेको रहेनछ, ढ्याम–ढ्याम भयो । ढालाले धेरै मान्छे च्याप्यो । अलि तल पुगेर गाडी पर्लङ्गै पल्टियो । त्यसपछि के भयो, मलाई केही थाहा भएन । १५–२० मिनेट बेहोस भएछु । उठेर हेर्दा जताततै लासैलास थियो ।
मेरो माइलो भाइ सन्त घर्तीमगर पनि दुर्घटनामा बित्यो । जिस्किँदै, चल्दै आएका तीनै जना बिते । हाम्रै साथीभाइले हामीलाई उद्धार गरे । घेलुङबाट नर्स पनि आए । घटनास्थलमै १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका थिए । ड्राइभर लाइसेन्सवाला नै हो । बरु लाइसेन्स नहुने अरू थुप्रै ड्राइभर छन् । हिजै त्यस्तो भयो । भाग्यको खेल होला ।
ड्राइभरले युवती काखमै बसालेर टिपर चलाएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ । हामी पछाडि थियौं । अगाडि ड्राइभरसहित तीन जना बस्ने सिटमा ७–८ जना थिए । दुई जना अपरेटर, दुई युवती, खलासी र ड्राइभर थिए । ढालाको लक भइदिएको भए पनि यति धेरै जना मर्ने थिएनन् ।
हामी २०५७ सालदेखि मुस्ताङमा बस्थ्यौं । बाटो खन्ने काम गथ्र्यौं । बेनीबाट कोरला जोड्ने बाटोमा ग्याबिन, पर्खाल, पुल, कल्भर्ट बनाउने काम गर्छौं । बिरुवा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने हामीजस्ताको धेरै समूह छ । दुर्घटनामा परेको दुई समूह मात्रै हो ।
मेरो पार्टनर रमेशका श्रीमती, दुई साला, जेठान, दिदीसासू, साढुदाइ र भदैलाई पनि यही दुर्घटनाले खायो । मेरो साँप्राको हड्डी भाँचिएको छ । अन्तिमसम्म कम्पनीले उपचार गर्ने हो कि होइन ? ठूलो भाग्यबाट बँचियो जस्तो लाग्छ ।
– ऋषि घर्तीमगर
(सुनछहरी गाउँपालिका, रोल्पा)
(दीपक परियारसँगको कुराकानीमा आधारित)
प्रकाशित : असार २४, २०७५ ०७:१४